‘श्रम सम्झौताले कामदार लैजाने विषयका सबै विवाद अन्त्य गरेको छ’
नेपालका लागि मलेसियका कार्यवाहक राजदूत अहमद फाडिल इस्माइल	| तस्वीर:काठमाडाै‌ प्रेस
करिब चार वर्षको अनुभव सम्हालेका नेपालका लागि मलेसियका कार्यवाहक राजदूत अहमद फाडिल इस्माइल अर्को हप्ता मलेसिया फर्कदै छन्। यसअघिका श्रम, सामाजिक सुरक्षा तथा रोजगार मन्त्री गोकर्ण विष्टले मलेसिया पठाउने कामदारको भिसा प्रोसेसिङ (भीएलएन), बायोमेडिकल (स्वास्थ्य परीक्षण), बायोमेट्रिक (सुरक्षा जाँच) र पासपोर्ट कलेक्सन गर्ने विभिन्न प्रक्रियामा सहभागी हुने मलेसियन सरकारका नेपाली भेन्डरमाथि गैरकानूनी र सिन्डिकेटको आरोप लगाएर ठगी मुद्दा पनि चलाए।
तर नेपालका लागि मलेसियाका कार्यवाहक राजदूतले ति सबै भेन्डरहरु मलेसियन सरकारको प्रक्रिया भएको र नेपाल लगायत विदेशी कामदार लिने १४ वटै मुलुकमा सोही प्रक्रियाबाट भिषा, सुरक्षा जाँच र स्वास्थ्य परीक्षण गरिने स्ट्याण्डर प्रक्रिया रहेको बताउँदै आए। यी विषयमा उनले मलेसिया सरकारका तर्फबाट श्रम मन्त्रालयमा पटक–पटक पत्रचार पनि गरे। त्यसको केही समयपछि नेपाल र मलेसियाबीच कामदार लैजाने विषयको सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भयो। र, तत्काल कलिङ भिषा आएका ७ हजार कामदारहरुलाई तुरुन्तै पठाउने पनि सहमति भयो। उनी भन्छन्, ‘सम्झौता भएको चार महिनासम्म कलिङ भिषा आएका कामदारहरुलाई श्रम स्वीकृति दिइएन।’ किन यस्तो भयो त ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘हाम्रोतर्फबाट विगतमा पनि समस्या थिएन र भोलि पनि समस्या नहोला। नेपालको आन्तरिक विषयमा मेरो थप भन्नु केही छैन।’ मलेसिया रोजगारी, नेपाल–मलेसिया सम्बन्ध र साझेदारीका सम्भावना लगायत विषयमा केन्द्रीत रहेर मलेसियन कार्यवाहक राजदूत फादिल इस्माइलसँग काठमाडौं प्रेसले गरेको कुरकानीः
कूटनीतिज्ञका रुपमा चार वर्ष लामो समय नेपाल बस्नु भयो। यहाँको अनुभव कस्तो रह्यो?
नेपाल बसाइका क्रममा मैले धेरै अनुभव गर्ने अवसर पाएँ। म यो अवधिमा नेपाल भएकोमा आफूलाई भाग्यमानी पनि ठान्छु। किनकि नेपालमा यो चार वर्षको अवधिमा धेरै परिवर्तनहरु भए। म नेपालमा पोष्टिङ भएर आउँदा भर्खरै महाभूूकम्प गएको थियो। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण लगायतका विषयमा धेरै अनुभव पनि बटुल्न पाएँ। यो अवधिमा मैले नेपालका चार जना प्रधानमन्त्री देखे। अहिले नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व छ। अब विकासतर्फ अघि बढ्नुपर्छ। सरकार र निजी क्षेत्र दुवै तर्फबाट विकासमा साझेदारी हुन आवश्यक छ। मलाई आशा छ केही वर्षमा नेपालले राम्रो उपलब्धि हासिल गर्नेछ।
मलेसियन सरकार नेपालको कुन क्षेत्रमा लगानी, सहयोग वा साझेदारी गर्न चाहन्छ?
हामी नेपालको भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गर्न तयार छाँै। हामीसँग ठूला–ठूला विमानस्थल, सडक र सुरुङमार्ग बनाएका अनुभव छन्। हाम्रो अनुभव नेपालको विकासमा पनि लागोस् भन्ने हाम्रो चाहना पनि छ। टर्कीको इस्तान्बुल विमानस्थल अहिले पनि हामीले व्यवस्थापन गर्दै आएका छौँ। हामीसँग भएको सिप र विज्ञता कुनै पनि हिसावले नेपालले लिन सक्छ। त्यसका लागि मलेसियन सरकार तयार छ।
मलेसियाले नेपालमा लगानी गर्ने विषयमा सरकारी तहमा कुनै औपचारिक छलफल वा प्रस्ताव आएको छ?
सामान्य छलफल त भएको छ। तर लगानी गर्न उच्चस्तरीय भेटघाट हुन आवश्यक छ। कम्तिमा प्रधानमन्त्रीस्तरीय भ्रमण गरेर यी विषयमा छलफल गर्न सकियो भने ठोस विषयहरु अघि बढ्न सक्छन्।
तपाँई नेपालमा लगानीको वातावरण कत्तिको देख्नुहुन्छ?
कसैले लगानी गर्छ भने उसले नाफा कमाउन त खोज्छ नै। विना नाफा कोही लगानी गर्न आउनेवाला छैन। त्यसका लागि लगानीमैत्री वातावरण सरकारले बनाउनु आवश्यक छ। त्यसमा अझै राम्रो मेहनत गर्नुपर्ने जस्तो मलाई लाग्छ। अन्य हिसावले लगानीका क्षेत्रहरु धेरै छन् र सम्भावना पनि धेरै छ।
ठूलो संख्यामा नेपाली कामदार रोजगारीका लागि मलेसिया पुग्ने गरेका छन्। तर केही समयअघि उक्त प्रक्रिया नै रोकियो। यस विषयमा तपाईंले कस्तो अनुभव गर्नु भयो?
म कार्यवाहक राजदूत भएकै बेलामा मलेसिया र नेपालबीच कामदार लैजाने विषयमा द्विपक्षीय सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भयो। यो मेरा लागि निकै खुसीको विषय हो।
सम्झौता अघि करिब १६ महिना नेपाली कामदार मलेसिया जाने क्रम रोकियो। यो अवधिमा एक लाखभन्दा बढी कामदारहरु मलेसिया जानबाट बञ्चित भए। हामीलाई पनि नेपाली कामदारको अभाव भयो। यो अवधिमा मैले मलेसियन सरकारको धारणा सञ्चारमाध्यममा पनि राखे र अन्य सरकारी निकाय समक्ष पनि राखे। यसमा मेरो थप भन्नु केही छैन।
भर्खरै नेपालमा मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन भएको छ, यसले मलेसिया जाने कामदारमा केही असर गर्छ?
यो नेपाल सरकारको निजी मामिला हो। मन्त्रिमण्डल हेरफेरले श्रम सम्झौता अनुसार कामदार लिनलाई कुनै समस्या छैन।
मलेसियन सरकारले नेपालबाट कस्ता जनशक्ति लैजाने योजना बनाएको छ?
यो विषय रोजगारदाता कम्पनीको आवश्यकतामा भर पर्छ। अहिले मसँग कस्तो जनशक्तिको मलेसियामा माग छ भन्ने विस्तृत विवरण त छैन। तर पनि विगत १९ वर्षदेखि मलेसियन रोजगारदाताहरुले नेपाली कामदारहरु लगिरहेका छन्। नेपाली कामदारहरु निकै परिश्रमी र अनुशासित छन्। म यसको उच्च प्रशंसा गर्दछु। जुनसुकै क्षेत्रमा नेपाली कामदारहरु मलेसिया जान सक्छन्।
विगत १६ महिनादेखि कामदार जाने प्रक्रिया रोकियो? त्यसपछि मलेसियाले अर्को देशबाट कामदार लिएको हो?
लामो समय कामदार लैजाने प्रक्रिया रोकिएको सत्य हो। त्यसबीचमा असमझदारी पनि भए होलान। तर हाम्रोतर्फबाट कामदार लिन विगतमा पनि असमझदारी थिएन र भोलि पनि हुँदैन।
यो समयमा नेपालबाट कामदार जान नसकेपछि फिलिपिन्स, म्यानमार, भारत, चीन लगायतका मुलुकबाट रोगजारदाताहरुले कामदार लैजाने प्रयास गरे। नेपाललाई दिएको कोटा हामीले अन्य मुलुकबाट कामदार लिन बाध्य भयौं। विगतमा कामदार मलेसिया लैजाने प्रक्रिया हाम्रो कारणले रोकिएको होइन।
मलेसियन सरकारका केही नेपाली भेन्डरहरुलाई तत्कालीन श्रममन्त्रीले धरपकड गरे, यस विषयमा के भन्नु हुन्छ?
नेपाल सरकारले मलेसियाले कसरी कामदार तेस्रो मुलुकबाट लिन्छ भन्ने नबुझेर यो समस्या आएको हो। हाम्रो भेण्डरमा कुनै समस्या छैन। हाम्रो प्रक्रियालाई तत्कालीन मन्त्रीले सिन्डिकेट भनेर बुझ्नु भयो, जुन गलत थियो।
तत्कालीन श्रममन्त्रीले ति भेन्डरहरुलाई ठगी मुद्दा नै लगाउनु भयो, उनीहरुलाई जोगाउन तपार्इंको पनि मिलेमतो थियो भन्ने पनि छ नी?
भिसा प्रोसेसिङ (भीएलएन), बायोमेडिकल (स्वास्थ्य परीक्षण), बायोमेट्रिक (सुरक्षा जाँच) र पासपोर्ट कलेक्सन हाम्रो विदेश कामदार लैजाने स्ट्याण्डर प्रक्रिया हो। ति भेन्डरहरुलाई कारवाही हुनभन्दा अघि तत्कालीन श्रम मन्त्रीसँग उहाँकै मन्त्रालयमा मेरो भेट भएको थियो। यो सबै हाम्रो प्रक्रिया हो भनेर मैले उहाँलाई अवगत गराएको थिएँ। उहाँले किन कारवाही गर्नुभयो यस विषयमा उहाँसँग नै बुझ्दा ठीक होला।
लोकल भेन्डरहरूले नेपाली कामदारसँग चर्को शुल्क उठाएको आरोप तत्कालीन श्रम मन्त्रीको थियो नी?
भिषा प्रक्रिया र सुरक्षा जाँच मलेसियन सरकारले तोकेको शुल्क हो। बायोमेडिकल सिष्टम सर्भिस चार्ज मलेसियन सरकारले तोके अनुसार र स्वास्थ्य परीक्षण नेपाल सरकारले अनुमति दिए अनुसार शुल्क लाग्ने हो।
श्रम सम्झौता अनुसार गठन भएको दुवै देशको प्राविधिक समितिले प्रक्रिया र शुल्कको विषयमा द्विपक्षीय सम्झौता भइसकेकाले आशा गरांै आगामी दिनमा यो विषयमा समस्या नहोला।
दुई देशबीच भएको सहमति पत्रमा अहिले गर्दै आएका ३६ वटासहित थप स्वास्थ्य संस्थालाई बायोमेडिकल गर्ने अनुमति दिने भन्ने विषय के हो?
अहिले नेपाल सरकारले प्रस्तावित गरेका र मलेसियन सरकारले पनि मान्यता दिएको ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थाले विगतदेखि नै स्वास्थ्य परीक्षण गरिरहेका छन्। अन्य कामदार लिने मुलुकहरुलाई हेर्नुहुन्छ भने हामीले मान्यता दिएको ३६ वटा स्वास्थ्य संस्था नै ठूलो संख्या हो। मलेसियामा विगत दुई महिना अघि नेपाल सरकार र मलेसियान सरकारको संयुक्त कार्यदलको सहमति भए अनुरुप ३६ स्वास्थ्य संस्थाले बायोमेडिकल गर्ने र बाँकी संस्थाहरुको हकमा असोज दोस्रो सातादेखि प्रक्रिया सुरु गर्ने सहमति भएको हो। उक्त सहमतिमा हामीले बिर्सन नहुने कुरा के पनि छ भने आवेदन दिएका स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई सर्ट लिष्ट गरी आवश्यकता अनुसार अनुगमन गर्ने, आवश्यकता अनुसार थपघट गर्ने सहमति भएको मलाई जानकारी छ।
अन्त्यमा तपाँईलाई केही भन्नु छ?
नेपाल बसाइका क्रममा मलाई सहयोग गर्नुहुने सरकारी निकाय, सञ्चारमाध्यम र मलेसियन राजदूतावाससँग सम्बन्धित निकायका साथै नेपाल सरकारसँग सम्बन्धित सबै निकायप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु।
Published Date: Monday, 2nd December 15:46:25 PM